Firaisana lalim-paka amin'Andriamanitra - Ny Fiangonana Presbyteriana eto Maorisy
Firaisana lalim-paka amin’Andriamanitra
Navoaka ny 17 May 2020
1 JAONA 4:12-16
« FIRAISANA LALIM-PAKA AMIN’ANDRIAMANITRA »
A) FEPETRA ROA
1) NY FANDRAISANA NY FANAHY MASINA (And.13)
Fanomezana sarobidy ho an’ny mino ny Fanahy Masina fa tsy vidiam-bola na loka ho an’ny izay manam-pahalalana akory.
Izay mandray Azy ihany no mahazo azy, izany hoe mibebaka.
Atra manakaiky ary miditra aty anatintsika Izy ka izany no ilazana fa “tempolin’ny Fanahy isika”.
Mahagaga izao tontolo izao isika, fa noho ny herin’ny Fanahy masina dia tsy mety leo na reraka mankany am-piangonana. Mahavita mitory ny fitiavan’Atra na @ olona tsy tia aza.
Na misy mamono aza dia mbola sahy mijoro sy mivavaka indray.
Na misy manenjika sy manao teny maharary aza dia ohatrany tsy nisy satria nahazo ny fanavaozana sy ny fampaherezan’ny Fanahy masina.
Io hery anaty ananan’ny mino io dia nambaran’ny Tompo hoe “Loharano miboiboika”, mantsy ilay vehivavy samaritana teo am-patsakana. “Ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay”, hoy Izy.
Ry Havana, tsy mety lany ny herinao raha ny Tompo no mitoetra ao anatinao.
2) NY FANEKENA AN’I JESOA KRISTY HO ZANAK’ATRA (And.15)
Ny teny hoe “Mitoetra” dia voambolana miverina matetika sady mavesan-danja ato @ Epistilin’i Jaona.
Hanondroana ilay Firaisana lalim-paka @ Atra izy io
Teny fototra grika hoe “menô” no nihaviany voalohany.
Manorim-ponenana (Demeure)no heviny. Monina ao amintsika mihintsy ny Tompo fa tsy mba mpivahiny intsony. Tonga tompon-trano Izy.
Ny fiangonana tao Efesosy, tao andrefan’I Turquie, no nanoratana voalohany ity epistily ity. Nisy antokon’olona nilaza tao fa tsy tena Atra Jesoa Kristy.
Koa fanamafisana ny and 15 hoe “Na iza na iza manaiky fa Zanak’ Andriamanitra Jesoa, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra”.
Atra ao @ fahafenoany mihintsy no mitoetra ao anatintsika. Voninahitra lehibe izany.
B) VOKATRY NY FIRAISANA @ ANDRIAMANITRA
1) NY FITOERANA @ FITIAVANA (And.16)
Lay fitiavana Agape (Grika) no ampiasaina eto.
Ilay fitiavana mahafoy ny tsara tsy miandry takalo.
Zava-dehibe ao @ fampianaran’ny Tompo ampitain’I Jaona io.
Ambarany fa Atra mihintsy no fitiavana
Mamehy ny maha-izy azy an’Atra sy ny asany. Ny anton’ny ataony rehetra,
na ny fitsapana sy famaizana aza, dia avy @ fitiavany avokoa.
Koa zay mandray Azy dia mitoetra ho azy @ fitiavana.
Satria avy @ Atra ny fitiavana marina (And7), ny toetrantsika dia lasa hahafantaran’ny olona ny toetran’Atra.
Io fitiavana io no hery manosika ( Moteur) mankany @ atao (Action).
Tsy manan-tahotra ny fitiavana (And 18), ka tonga sahy isika.
Tsy mahazo aina isika raha tsy mivavaka @ Atra, na mivoha ny trano fiangonana na tsia, manompo Azy hatrany na inona na inona fahasahiranana.
Tsarovy fa Atra no nitia antsika mialoha.
“Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy”.
Ao @ fitiavana no tena misy fahefana mahavita zavatra tsara, toy ny nahafoizan’Atra Ray ny Zanany lahitokana.
2) NY FIFANKATIAVAN’NY MPIRAHALAHY (And.12)
Agape hatrany no voambolana nampiasaina eto.
Ny fitiavana ny namana no hahafantarana ny Kristiana, hoy Jaona
“Izany no hahafantaran’ ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia” ( Jao 13.35).
Rehefa tena mitoetra ao anatinao Atra dia tena halavirinao ho azy izany adiady sy fitsitokotokoana ao am-piangonana izany, satria avy @ Satana, lay mpampisaraka zany.
Io fitiavana ny namana io no mampiray antsika ao @ fiangonana satria Kristy irery no fihavanantsika ao.
Tsy ny maha-mpihavana, na maha-mpiray fihaviana, na maha-mpiray firehana politika no maha-mpiray fiangonana antsika, fa Kristy, izay Lohany.
1 Jao 4.20 “Raha misy manao hoe: Tia an’ Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy; fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an’ Andriamanitra Izay tsy hitany ?”
Ny tena fitiavana dia manome fa tsy mandray, toy ny nanomezan’ny Ray ny zanany (Jao 3.16).
Matoa isika nitia ny hafa dia nahafoy fanajana, fotoana, fihainoana azy, vavaka ho azy, ary fitaomana azy ho ao @ Tompo.
Ny olona tia dia manam-pifaliana. Tsy @ fifankatiavan’olon-droa ihany, fa @ zavatra rehetra.
Tsarovy fa rehefa feno fankahalana sy lolom-po ianao dia miteraka fahasimbana ho anao izany.
Ny fonao lasa tsy mitepo ara-dalàna, indrindra rehefa mieritreritra na mifanehatra @ lay olona hankahalainao.
Manaraka ho azy ny fisefosefonao ka lasa voaloto ny sainao sy fonao, simba ny tontolonao.
Ny fitiavana tanteraka « Amour parfait » (And 17) dia maharesy ny lolom-po sy ny fankahalana. Amena.